Saacad Qaali ah oo suuqa xaraashka la geeyey, kadibna cid iibsata la waayey. – Soomaali 24 Media Network
Saacad Qaali ah oo suuqa xaraashka la geeyey, kadibna cid iibsata la waayey.
Posted on April 2, 2021 Leave a Comment on Saacad Qaali ah oo suuqa xaraashka la geeyey, kadibna cid iibsata la waayey.
Sheekada saacaddan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay qabsaday warbaahinta Caalamka iyo baraha ay Bulshadu ku xiriirto, kadib markii la waayey cid iibsata, maxayse tahay sababtu?
Saacad abaal marin ahaan loo siiyay askar si adag talaabo uga qaaday dad ku mudaharaadayay fagaaraha Tiananmen Square ee ka dhacay magaalada Beijing sannadkii 1989 ayaa la waayay cid iibsata kadib markii lasoo dhigay suuq xaraash.
Shirkadda xaraashka ee Fellows ayaa sheegtay in shaqsigii lahaa saacada la xaraashayay ay ku xardhan tahay “89.6 Xuska soo Afjariddii Fallaaganimada” uu dib ugala noqday Suuqa kadib hanjabaadyo culus uu la kulmay.
Fariimo hanjabaadyo ah oo baraha bulshada lasoo marsiiyay ayaa keentay in la waayo qof ku dhiirada in uu iibsado saacadaasi , waxa sidoo kale hanjabaadyadaasi saameyn ku yeesheen shaqsigii suuqa xaraashka keenay saacada sida ay shirkada Fellows sheegtay
Gudida xisbiga shuuciga ah iyo dawladda hoose ee Beijin ayaa saacad abaal marin ahaan u siiyay askari katirsanaa ciidamada Shiinaha, waxa ayna shirkada xaraashka sheegtay in ruuxa saacada xaraashayay uusan shaqo ku laheyn dowlada iyo ciidamada Shiinaha.
Saacadan Suuqa xaraashka cabsi darteed dib looga celiyay ayaa xiiso gaar ah hada yeelatay, waxa ayna sheekada saacadan hadal heyn badan ka abuurtay baraha bulshada iyo Warbaahinta caalamiga.
← Qaramada midoobey oo war kasoo saaray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Shirkadda Apple oo Aqbashay in Furaha Soomaaliya ee 252 wax looga diiwaangashado. →